I-amazon alexa ngoku inokunxibelelana nabashicileli, nantsi indlela
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo IAmazon Alexa ngoku inokunxibelelana nabashicileli, nantsi indlela
IAmazon Alexa ngoku inokunxibelelana nabashicileli, nantsi indlela
Ingavakala imangalisa kodwa IAmazon Alexa awuvumanga abasebenzisi ukuba banxibelelane nabashicileli basebenzise ilizwi. Iindaba ezimnandi kukuba iAmazon ithathe amanyathelo afanelekileyo okuqinisekisa ukuba abasebenzisi be-Alexa abayi kuphulukana neli nqaku liluncedo.
Ukuqala kule veki, nabani na osebenzisa i-Echo okanye nasiphi na isixhobo esineAmazon Alexa uya kuba nakho ukusebenzisa ilizwi labo ukuprinta amaxwebhu kumshicileli ofanelekileyo. Yitsho ngokulula “Alexa, fumana umshicileli wam”Phambi kokuba uqalise, kwaye kuxhomekeke kwinto ofuna ukuyiprinta, sebenzisa nayiphi na le miyalelo yelizwi:
'Alexa, phrinta uluhlu lwam lokuthenga'
'Alexa, phrinta uluhlu lwezinto eziza kwenziwa'
Amagama aphambeneyo kunye neMidlalo
'Alexa, phrinta iphazili yamagama'
'Alexa, ndishicilele namhlanje & apos; s crossword'
'Alexa, ndishicilele namhlanje & apos; iimpendulo zegama eliphambili'
'Alexa, ndishicilele ngeCawe ephelileyo & apos; s crossword'
'Alexa, ndishicilele ngeCawe ephelileyo & apos; iimpendulo zegama eliphambili'
'Alexa, phrinta iphazili yeSukodu'
'Alexa, phrinta i-maze elula'
Amaphepha okusebenzela aBantwana
'Alexa, phrinta iphepha lokusebenzela elongezwayo lokuqala'
'Alexa, phrinta iphepha lokusebenzela eliphindaphindayo'
'I-Alexa, phrinta iphepha lokusebenzela elikwinqanaba lesine
'Alexa, phrinta iphepha lokusebenzela lopelo lesigaba sesibini'
'Alexa, phrinta iphepha lokusebenzela malunga nezandi zeleta zabantwana abasaqalayo'
'Alexa, phrinta iphepha lokubala'
'Alexa, phrinta iphepha elinombala kunye nezilwanyana zaselwandle'
'Alexa, phrinta iresiphi yenkukhu'
'Alexa, phrinta iresiphi yesalmon'
'Alexa, phrinta iphepha lovavanyo'
'Alexa, phrinta iphepha legrafu'
'Alexa, shicilela iphepha elinemigca'
Gcina ukhumbula ukuba inqaku lifuna ukuba umshicileli wakho aqhagamshelwe kwinethiwekhi efanayo engenazingcingo njengesixhobo sakho se-Alexa. Ukuba awufuni ukusebenzisa i 'Alexa, fumana umshicileli wamUmyalelo welizwi, qiniseka ukuba ujonge kwiscreen sezixhobo kwi-Alexa app, khetha u '+' / 'Yongeza isixhobo' / ukhethe 'iPrinta.' Nge-Alexa yeAmazon, unokuprinta uludwe lwezinto eziza kwenziwa, imidlalo, iphepha legrafu, iphepha eligciniweyo kunye namaphepha ovavanyo.
Ungayifumana njani impendulo kaJson ekuphumleni kwiJava
Ukukhulula i-iphone 7
Ngaba ii-earphone ezingenazingcingo zikhuselekile?
I-USA! Amaxabiso ePixel 2 aphesheya enza iMelika incume, kakhulu njengeePhones '
Lumkela amakhadi enkohliso e-microSD! Nazi iiapos zendlela yokuxoka into engekhoyo kwasekuqaleni
Idili: Inqanaba le-Samsung le-Pro leendlebe zeBluetooth zifumana isaphulelo esikhulu sama-65% kwiAmazon
Ngaba ngenene wenza u-Agile oZenzekelayo wovavanyo?
Inqanaba le-Samsung U Uvavanyo
I-Lenovo Moto G4 Dlala vs Moto G4 vs Moto G4 Plus thelekisa: bona konke ukwahluka
Ngaphambi kokusonga i-Sprint, i-T-Mobile ityhila elona xabiso liphezulu lingenamkhawulo lesicwangciso se5G kunye neefowuni zasimahla ze5G
Uphengululo lweMeko yeNgxelo yeOtterbox